जीवनको संगीत संग मजा जाने! यो, बिहान उठ आफ्नो मनपर्ने रेडियो स्टेशन खोल्न राम्रो - र बिहान तुरुन्तै थप हँसिलो हुनेछ। फेरि कार मा प्राप्त र आफ्नो मनपर्ने लहर फेला - सडक लामो जस्तो हुनेछ, र ट्राफिक जाम - अल्छीलाग्दो छैन। एक कठिन दिनको काम पछि आराम गर्न साँझ पनि, ट्युन गर्न आफ्नो मनपर्ने रेडियो स्टेशन मदत र मूल आवाज रेडियो उपस्थापक भयो हुनेछ। मुख्य कुरा हो - आफ्नो मनपर्ने लहर, आत्मा र मन मा छ जो फेला पार्न। विकल्प गाह्रो थिएन त, Nizhny Novgorod मा लोकप्रिय रेडियो स्टेशन विचार गर्नुहोस्।
Nizhny Novgorod लोकप्रिय रेडियो स्टेशन को सूची
रूपमा लोकप्रिय सबै-रूसी रेडियो स्टेशन रूपमा Nizhny Novgorod प्रसारण प्रसारण रूस को कुनै पनि शहर, मा साथै स्थानीय, शहरी।
नागरिक विभिन्न विभाग लागि डिजाइन रेडियो स्टेशन को लक्ष्य दर्शक, र प्रत्येक व्यक्ति लहर को अवधारणा, तर कुनै पनि प्रसारण जग - संगीत र मनोरञ्जन कार्यक्रम।
Nizhny Novgorod मा रेडियो स्टेशन सूची विचार गर्नुहोस्।
सूची लामो समय को लागि नै तरङलम्बाइ छन् र लगातार उच्च मूल्यांकन र विस्तृत दर्शक छन् लोकप्रिय रेडियो स्टेशन देखाउँछ।
यी को, एक भन्दा रोचक रेडियो Nizhny Novgorod हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
शहरी रेडियो लहर Nizhny Novgorod। यसको फ्रिक्वेन्सी 99,5 एफएम, साथै अनलाइन इन्टरनेट मा यो सुने गर्न सकिन्छ।
उएन रेडियो श्रोता 2011, यसलाई "रेडियो Nizhny Novgorod" भनिन्थ्यो जब परिचित छन्। 2013 मा, त्यहाँ परिवर्तन भए र रेडियो यसलाई वर्तमान दिन भालु भनेर नयाँ नाम प्राप्त भएको छ - NN रेडियो।
एक को स्टुडियो मा के भइरहेको छ सुन्न सक्नुहुन्छ प्रमुख हुनुको साथै, तपाईं अझै पनि देख्न सक्नुहुन्छ - यो पनि प्रसारण र भिडियो छ।
को airwaves मा तपाईं, नवीनतम समाचार र महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ प्रमुख संग कुराकानी गर्न, खेल र प्रतियोगिताहरु मा भाग लिन।
यस एफएम-रेडियो Nizhny Novgorod विशेष लोकप्रिय सबै-रूसी रेडियो "एफएम हिट" हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ विचार। पकड यो 101 को एक आवृत्ति,4मा हुन सक्छ।
Nizhny Novgorod मा, "एफएम हिट" 1999 देखि सञ्चालन गरिएको छ र रूस मार्फत 71 शहर मा संचालित।
हावा मा तपाईं लोकप्रिय संगीत, समकालीन rhythms र सबै शीर्ष रूसी र विदेशी गीत सुन्न सक्छ।
स्टेशन नाम नै लागि बताइएको - एक गतिशील र विस्फोटक रेडियो पट्टाइ लाग्ला छैन। 96,0 एफएम आवृत्ति।
रेडियो स्टेशन मा आधुनिक क्लब संगीत माहिर र रात क्लब जीवन, सांगीतिक घटनाहरू र दल को एक किसिम illuminates।
Nizhny Novgorod "Dynamite" मा रेडियो स्टेशन को लक्ष्य दर्शक विद्यार्थी देखि ठूलो संगठन को अधिकारी गर्न, व्यापक छ। साथै, यो बाटोमा पट्टाइ लाग्ला दिन नगर्ने आफ्नो आगोको rhythms लागि मोटर चालकहरुलाई द्वारा प्रेम छ।
सबैभन्दा रोमान्टिक र Nizhny Novgorod मा नै समय ऊर्जावान रेडियो मा। आवृत्ति 104,9 एफएम।
सबै प्रसारण सफ्टवेयर प्रेम विषय आधारित छ। कार्यक्रममा प्रेम पावर, प्रेम सन्देश, "Entourage" भाडामा, एक जोडी ",", माथि ठूलो प्रेम 20 भनिन्छ "मेरो सपना तपाईं पूरा छ"।
रेडियो तपाईं Nizhny Novgorod मा एफएम रेडियो स्टेशन को आवृत्ति, साथै अनलाइन दुवै सुन्छ, र पनि गर्न सक्छन् आफ्नो स्मार्टफोन लागि सजिला अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबैभन्दा सकारात्मक रेडियो Nizhny Novgorod। आवृत्ति 107,4 एफएम।
रेडियो, मुख्य अवधारणा जो संगीत र मनोरञ्जन गतिविधिहरु छ। Jokes, हास्यास्पद अंशहरूको, भाषण humorists एक धेरै। र पनि संगीत, groovy को र धेरै मजा।
को ईथर सुनेर साथै, तपाईं, अग्रणी सँग कुराकानी गर्न सक्छ प्रतियोगिताहरूमा र चिट्ठा भाग, आफ्नो मनपर्ने संगीत आदेश।
सबै रेडियो स्टेसन बीचमा 30 वर्ष उमेर भन्दा नागरिक फ्रिक्वेन्सी 104,5 एफएम मा स्थित "रेडियो Dacha", छ फेंकना।
2010 देखि यो समयमा रेडियो प्रसारण 200 भन्दा बढी हजार हरेक दिन यो लहर मा ठ्याक्कै आफ्नो रिसीभर सक्रिय विश्वासी श्रोताहरू संकलित छ।।
संगीत 80-90 वर्ष - यो रेडियो लहर को फाइदा। ती वर्ष मा गीतहरू त प्रिय केटाहरू र बालिका, हाम्रो दिन आफ्नो प्रशंसक "रेडियो Dacha" गरे।
तपाईं हावा मा कल गर्दा, यो नमस्कार भन्न र आफ्नो प्रियजनलाई बिदा बधाई गर्न सम्भव छ।
रेडियो सुन्दै त रिसीभर मार्फत र इन्टरनेट वा एन्ड्रोइड र आइओएस लागि अनुप्रयोगहरू संग हुन सक्छ।
प्रत्येक श्रोता, Nizhny Novgorod को रेडियो स्टेशन मार्फत flipping, उहाँलाई मुड र सकारात्मक चार्ज उठाने, बिहान र साँझ, हप्ताको समयमा र सप्ताहन्तमा मा साथ दिनु हुनेछ भन्ने किसिम बीच चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
विरोधी Semitism - यो के हो? विरोधी Semitism को कारण। रूस मा विरोधी-Semitism
मास्को राज्य विश्वविद्यालय को जनावर संग्रहालय। एम वी Lomonosova ठेगाना, समीक्षा, प्रदर्शन
धरती मा सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति
पद्धति "सिउँडी": अध्ययन र परिणाम व्याख्या
होटल समीक्षा: Acg होटल पूर्वी परिवार (Alania)
Kernos बीच4(ग्रीस / क्रेते): फोटो र समीक्षा
"किरण अघि" phraseologism अर्थ, र प्रयोग को उदाहरण